Ha moogaan faahfaahin ah Tour de France oo ay la socoto barnaamijkeeda rasmiga ah | Wararka IPhone
Ha seegin faahfaahinta Tour de France oo ay la socoto barnaamijkeeda rasmiga ah
Waqtigan xaadirka ah nolosha bisha Luulyo waa wax aan macquul ahayn la'aantood Tour de France, iyo dhowr sano sidoo kale way adkayd inaan laga fekerin in lagu kabo dhammaystirka kormeerka wareega quraafaadka quraafaadkiisa iyo codsigiisa rasmiga ah. Sannad kasta waxaan jecel nahay inaan fiirino, oo daabacaadda 2017 ma ahan mid naga yaraan doonta.
2 Waxyaabo badan
Adeegsiga ugu weyn ee arji la socda a safar baaskiil weyn waa inay noqotaa mid si aan macquul ahayn ula socota tartanka maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo la raacayo faahfaahin aan laga yaabo inaan ka heli karno baahinta, ama aynaan helin markii aan u baahanno. Hubinta astaanta marxaladda, helitaanka sharraxaadda ama jadwalka ugu dhow ayaa ah dhammaystir buuxa oo loogu talagalay baahinta telefishanka, midkood Televisión Española ama kan Eurosport, oo badanaa ku badan xogta iyo dhammaadka marxaladda, tusaale ahaan.
Daabacaadda 2017, qaabka dalabku wax badan ayuu iska beddelay marka loo eego sanadkii ka horreeyay, iyadoo laga sameeyay aragtidayda xoogaa dareen yar laakiin, haa, dhakhso badan Intaas waxaa sii dheer, ikhtiyaarka ah "Sida loo tago halkaas" waxaa lagu soo daray dhammaan geesiyaasha ku dhiirraday inay yimaadaan si ay u arkaan masrax oo ay rabaan inay aadaan dhibcaha ay marayaan.
In menu menu waxaan marin u leenahay qaybaha kale ee dano qaraabo ahs, oo ka mid ah waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo afar: guddiga ugu cadcad, halkaas oo aan la socon karno orodyahannada sida aadka ah noo daneynaya; ogeysiisyada, kuwaas oo gebi ahaanba laga beddeli karo waxa ku saabsan tartanka; iyo ugu dambeyntii, marin u helka shabakadaha bulshada ee tartanka halkaas oo aan si toos ah uga arki karno astaamaha Twitter, Instagram iyo Facebook ee Tour de France.
Sida iska cad waxaan sidoo kale la tashan karnaa mid kasta oo ka mid ah kooxaha ka qeyb galaya gala iyo dhamaan orodyahanada shaqsiyaad guruub ah, iyo sidoo kale kala soocida guud Oo isku mid ah. Waxaas oo dhan waxaa loo habeeyay si hagaagsan oo nidaamsan, in kasta oo ay tahay in la ogaado in aan helnay qaybo ka mid ah dalabka oo si liidata loo tarjumay, wax ayna ahayn in kiisku ku jiro barnaamijka rasmiga ah ee tartanka sida Tour de France
App waa gabi ahaanba bilaash iyo xayeysiis marka laga reebo kafaala qaadka magaca Skoda, sida caadada u ahayd daabacadihii hore. Dalxiiska 'Tour de France' wuxuu marayaa meeshii ugu sarreysay ee ha ka waaban inaad ka dhammaystirto taleefankaaga iPhone qiime eber ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ha seegin faahfaahinta Tour de France oo ay la socoto barnaamijkeeda rasmiga ah
Tim Cook iyo Eddy Cue ayaa kaqeyb galaya shirka sanadlaha ah ee Sun Valley
Apple waxay leedahay bilyan sababood oo loogu guuleysto Xaqiiqada 'Augmented Reality'